Ahoana ny fomba hizarana mandeha ho azy ny hafatrao WordPress amin'ny LinkedIn amin'ny alàlan'ny Zapier | Martech Zone
Iray amin'ireo fitaovana tiako indrindra amin'ny fandrefesana sy famoahana ny fahana RSS-ko na ny podcasts-ko amin'ny media sosialy Feedpress. Mampalahelo fa tsy manana fampidirana LinkedIn ny sehatra. Nanatona aho hijery raha hanampy an'io izy ireo ary nanome vahaolana hafa - fanontana amin'ny LinkedIn amin'ny alàlan'ny Zapier.
Zapier WordPress Plugin mankany amin'ny LinkedIn
Maimaimpoana ny Zapier amin'ny fampidirana vitsivitsy sy hetsika zato, ka afaka mampiasa an'io vahaolana io aho nefa tsy mandany vola amin'izany… tsara kokoa aza! Ity ny fomba hanombohana:
Manampia mpampiasa WordPress - Manoro hevitra anao aho hanisy mpampiasa amin'ny WordPress ho an'ny Zapier ary hametraka teny miafina manokana. Amin'izay dia tsy mila miahiahy amin'ny fanovana ny tenimiafinao manokana ianao.
Ampidiro ny Plugin Zapier WordPress - The Zapier WordPress plugin mamela anao hampiditra ny atiny WordPress amin'ny serivisy isan-karazany taonina. Ampio ny solonanarana sy ny teny miafina napetrakao ho an'ny Zapier.
Ampio ny WordPress ao amin'ny LinkedIn Zap - The Zapier LinkedIn pejy dia misy fampidirana maromaro efa voatanisa… ny iray amin'izany dia ny WordPress mankany Linkedin.
Zapier WordPress mankany amin'ny Template LinkedIn
Midira ao amin'ny LinkedIn - angatahina ianao hiditra ao amin'ny LinkedIn ary hanome alalana ny fampidirana. Raha vantany vao vita ianao dia mifandray ny Zap.
Alefaso ny Zap anao - Alefaso ny Zapanao ary amin'ny fotoana hamoahanao lahatsoratra amin'ny WordPress dia hozaraina ao amin'ny Linkedin! Ho hitanao izao ny Zap mihetsika ao amin'ny Zapier Dashboard anao.
Ary eo ianao! Ankehitriny, rehefa mamoaka ny lahatsoratrao amin'ny WordPress ianao, dia havoaka ho azy ao amin'ny LinkedIn.
Oh… ary rehefa mamoaka any aho izao, angamba te hanaraka ahy ato amin'ny LinkedIn ianao!
Araho Douglas Karr ao amin'ny LinkedIn
Tags: fahano amin'i linkinLinkedInfamoahana linkinmamoaka wordpress mankany linkinrss mankany amin'i linkinfamoahana media sosialyWordPressplugin WordPresswordpress mankany Linkedinwordpress mankany amin'ny linkin zapzapierzapier plugin WordPress